i-feed mixer iyathengiswa,umshini wokuxuba izinkomo,okuvundlile okuhlanganayo
Ikhono:800~ 1200kg / h
Umshini wokuxuba okuphakelayo yisinyathelo esibalulekile isitshalo sokukhiqiza i-pellet ngenxa yomthelela wayo oqondile kukhwalithi yama-pellets okuphakelayo. Imishini yokuxuba okuphakelayo yenziwa ngendlela efanayo ukuxuba izinhlobo ezahlukahlukene zempuphu eluhlaza futhi kwesinye isikhathi izisetshenziswa zokufaka uketshezi ziyadingeka ukuze zisetshenziselwe ukufaka izithako zokudla ezilinganayo ukuze kuhlanganiswe kangcono. Ngemuva kokuxuba kakhulu, izinto zokwakha zilungiselela indlela yokukhiqizwa kwama-pellets aphakeme aphezulu okuphakelayo. Imishini yethu yokuxhuma eyenziwe ngokwezifiso ikwazi ukuthandwa emakethe.Ukulungiswa kungathuthukisa ukufana kwamasayizi ezinhlayiya kwakha isando se-hammer ukuze kugcinwe ebunzimeni obufanayo, athuthukisa ngqo ikhwalithi yomkhiqizo. Ngakho-ke umshini wokuxuba izinkomo yisixhobo esibucayi ku ukukhiqizwa kwama-feed pellet. ukuxuba izinkomo okuxutshwe nge shaft eyodwa ne-ribbon enikelwe yinkampani yethu, oqanjwe futhi ngokuthi yi-ribbon blender, isetshenziselwa ikakhulukazi ukuxuba izinto zokuphaka ezinoshukela ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi ephezulu yokuphakelwa kwendle. Futhi lesi sixubanisi sezinkukhu siyinhlanganisela eyenziwe kahle yezinhlanzi eyenzelwe izinhlanzi nezinye izitshalo zokukhiqiza ukudla kwemfuyo.
Izici zokuxuba okuphakelayo
1. I-homogeneity ephezulu: lolu hlobo lwe-single shaft feed mixer design luqinisa ukuguqulwa, ukugunda, kanye nemiphumela yokuxuba.
2. Ukuxuba ngokulinganisela kanye nokufana okuphezulu, akukho ukwahlukanisa.
3. Unobuntu: isakhiwo esilula nesinengqondo, ukulungiswa okulula, thembekile, kuphephile, okusebenzayo nokutshalwa kwezimali okuncane. Isixhumi sokuphakelayo singafakelwa ijakhethi ukufudumeza insimbi nezinto zokupholisa. Ngesikhathi esifanayo, izinto zokufakelwa ezishisayo nazo zingafakwa njengoba kudingeka.
4. Ukusetshenziswa okuningi: le mixer yokudla kwezinkomo ingasetshenziselwa ukuxuba okuphakelayo, izithasiselo zokudla, isigaxa, abicah irabha, umbala, uyinki wokuphrinta, uphalafini, resin, ukhilimu osanyamalalayo, amafutha, okokuhlanza, njll; futhi futhi isetshenziselwe ukuxuba i-viscous fluid kanye nobukhulu, izinto zokwenza izinto ezixutshwe nobumba.
5. Kusetshenziselwa ukuxuba kwe: impuphu enamapoda; izimpuphu ezinamanzi
6. Isakhiwo esikhulu esivulekile, okuphakelayo okusheshayo, okusalile okuncane, ukuhlangabezana nezidingo zokungeza uketshezi.
Ukusebenza nokunakekelwa Komshini Wokuxubha Okuphakelayo
Ngemuva kokuqala ukuxubana, hlola ukuqondisa kwayo ukusebenza ngesikhathi ukuze uvikele ukubuyela emuva.
Umthwalo we-mixer akufanele weqe ivolumu esebenzayo.
Ngemuva kokuyisebenzisela 15 izinsuku okokuqala, khipha u-oyili wokuthambisa bese ugeza ithangi lamafutha; shintsha uwoyela wokugcoba ku-isivinini sokunciphisa isivinini njalo ezinyangeni ezintathu, bese ugcwalisa u-oyela emafutheni njalo ezinyangeni ezimbili.
Repair Ukulungiswa okuncane kwe-mixer kuyadingeka ngemuva 1800 ukusebenza okujwayelekile, ikakhulukazi ukuhlola iphoyinti lokugcoba noma ukufaka esikhundleni sezingxenye ezigqokile; ukuguqulwa kuyadingeka ngemuva 4000 ukusebenza okujwayelekile, ikakhulukazi ukusabalalisa ukuze uhlole futhi uhlanze zonke izakhi, buyisela noma ulungise zonke izingxenye ezigqokile nezingxenye ezijwayelekile.
ukucaciswa komxubanisi wokudla okuvundlile